I Apollonius avy any Tyana ve no Kristy "marina"? - AFRIKHEPRI
I Apolloniosy avy amin'i Tyana ilay "tena" Kristy?
Chabin, mulatto: Qualifatives miaraka amin'ny konjotra pejorative sy zoological
ny maraina, afaka 25, 2020
Apollonius avy any Tyana
A ny fotoana niainan'ny Kristy ny Filazantsara dia nisy "Christs" hafa maro tany Azia Minor sy tany Atsinanana, farafaharatsiny izany izay manambara boky mampientam-po, navoakan'i Robert Laffont avy amin'ny mpanoratra Paris. , Egyptologistologist, Jean-Louis Bernard. Ity boky ity, mitondra ny lohateny hoe: "Apollonius an'i Tyana sy Jesosy", dia miorina amin'ny bibliôly be dia be izay mirakitra ireo hetsi-panoherana momba an'i Jesosy, asan'ny maoderina, fijoroana ho vavolombelona taloha ary indrindra amin'ny asa fototra, karazana evanjely iray araka ny fombany: "Fiainan'i Apollonius an'i Tyana" nosoratan'i Philostratus, mpanoratra grika, teraka tao Lemnos tamin'ny taona 175 taorian'i Kristy. Zato taona taorian'ny nahafatesany, i Philostratus dia nanoratra ny tantaram-piainany tamin'ny fangatahan'i Julie, ilay Philosopher Empress. Io no hany rakitra feno azo jerena ao amin'ny Apollonius any Tyana. Teraka iray na roa taona talohan'ny nanombohan'ny vanim-potoana Kristiana, tao Tyana avy amin'ny ray aman-dreny mpivarotra manankarena izay nanome azy fampianarana marimarina, Euthydemus no mpampianatra voalohany azy. Tsapa ho toy ny nanaitra ny fanambarana nataony, noho ny Euxene Tompony faharoa. Napetrany tao aminy ny foto-pinoan'i Pythagoras ary, rehefa avy nampianatra izy dia nanapa-kevitra ny hipetraka ho Pythagorean i Apollonius tanora. Ny fahafatesany dia teraka tamin'ny 98 na 99 taona. Manjavona tsy misy lamosina izy, tsy misy vavolombelona, ​​izay manampy trotraka eo amin'ny fiainany. Apollonius dia nanana ny mpianatra, ny apôstôly ary izy koa dia mpianatr'i Pythagoras sy mpandova ny zava-miafina tany Ejipta. Marihina fa tamin'io fotoana io, ny teny hoe "Kristy" dia fahita matetika: amin'ny teny grika, "Çhrestos" ary "Christos" dia midika hoe: "ny tsara, ny voahosotra". Fa io teny io dia avy amin'ny teny phonetika koa avy amin'ny Ejiptiana hieroglyphic "khery-cheta". "Ilay manjaka ny zava-miafina", "ny fanaovana".
Ankehitriny, Apolonia dia iray amin'ireo nipoitra, karazan'olona mpifaninana mivantana an'i Jesoa Aramaika izay "nampidirina" ho antsika ny sivilizasionantsika Kristiana. Apollonius, mipetraka ao Pythagoras. "Olombelona ihany aho, fa ny olona tsirairay dia afaka manandratra ireo andriamanitra, amin'ny fandinihana sy ny filozofia. Nifanena tamin'ny fisandratana, namintina ity fehezanteny ity ary naneho ny fahatanterahan'ny andininy. Tsy nisy filozofa hafa, Apollonius, nanaraka akaiky ny Pythagorean. Apollonius dia maneho mazava tsara ny fotopampianaran'ny Sage of Samos. Miakanjo rongony izy, tsy mihinana hena, mihatra amin'ny tenany ny fitsipi-pifehezana rehetra mifototra amin'ny fampianarana Philosophical. Tsy afa-po amin'ny fametrahana ny fanavaozana ny fitondran-tena, manitsy ny fahadisoana sy ny fanararaotan'ny mpitondra fivavahana, i Apollonius dia mandoa ny tenany amin'ny fanolorany ny sarin'ny fahendrena ho an'ny mpiara-belona aminy. Tiany ny hanome ohatra iray ahafahan'ny tsirairay mianatra. Ny fahatsinjovana novokarin'ny mpiara-belona taminy dia nanamarika lalina azy ireo. Nandritra ny androm-piainany dia nankasitrahan'Andriamanitra izy, natahotra ny heriny mihoatra ny herim-batana ary nankasitraka ny toetra malotony. Miady mafy izy amin'ny fitazonana ny fotopampianarana Pythagoreanina amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny andriamanitra taloha. Ny vahoaka, izay mazoto maneho fihetsiketsehana, dia matetika no mitsara ny kalitaon'ny fampianarany amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Ny lisitr'ireo fahagagana nataony dia toy izany fa nandritra ny taona maromaro dia sarotra ny nanasaraka ny fahamendrehan'i Apollonius sy i Kristy. Matetika ny teniny dia manohitra ny an'i Kristy ary tsy manitatra ny milaza fa ny fivavahana roa dia mifamatotra amin'ny toetrany. Ny fitarihan'i Apollonius dia naharitra. Taonjato efatra taorian'ny nahafatesany dia mbola nomem-boninahitra ny voninahitra. Raha ny marina dia nanjary nalaza be i Apollonius tamin'ny fotoana nantsoina hoe "mpiasa mahagaga ao amin'ny empira".
Kanefa, raha vao niparitaka ireo Evanjely, dia natsipy tao anaty haizina izy ireo, fa i Kristy Aramaika dia nentina an-dalambe. Ny Fiangonana koa dia mametraka ny heriny rehetra ao aminy amin'ny alàlan'ny tsy ahafahantsika miantehitra amin'ireo Evanjely efatra fantatsika (na dia nosoratana vao haingana aza); Rehefa nanao izany izy, dia nanadino an-tsitrapo an-tsoratra evolisiona maro be (apôkrifa), izay tsy nifanaraka tamin'ny fiainan'i Jesoa "araka ny sitrapony", idealy, homogeneous ary resy lahatra. Apollonius, tamin'ny taonjato voalohany amin'ny vanim-potoana misy antsika, dia voatonona ao amin'ny tantara grika-romanina. Ny antony mahatonga ny kabinetran'ny mistery dia midika izany ho fahadisoam-panantenana, izany no manontany tena anio. Nisy Kristianina roa nanorina ny Kristianisma? Moa ve ny tantarany roa mifangaro amin'ny anaran'ny iray? Na ahoana na ahoana, ny olana amin'ny fifandraisana eo amin'ireo olona roa ireo dia manan-danja lehibe. Ny fampiraisana an'i Apollonius dia nanohy ny fisiany tsy manam-petra, niampita ny tanàn-dehibe tamin'ny androny, Roma, Alexandria, Antiokia, ary nanosika ny fitadiavany fahendrena tany Ejipta sy Inde.
Na aiza na aiza alehany, dia manao zava-mahagaga izy, izay siantifika miafina, ary antsoina hoe fahagagana. Miaina mandrakizay ny zavamananaina ary tsy mihinana afa-tsy zava-maniry. Manao akanjo lava izy, manao akanjo vita amin'ny lamba rongony, ary mandany lava volo. Rehefa maty ny rainy, dia nizara ny toerany izy, nandà ilay vehivavy. Nandritra ny dimy taona dia nandao ny tanàna izy ary nangina. Avy eo izy dia namelona ny fiainana ampahibemaso, nihevitra ny andriamanitra tamin'ireo mpisorona, niaraka tamin'ireo mpianatra fito teo amin'ny andaniny. Amin'ny diany dia mandray mpiasa roa sy mpanohana azy izy. Tany Ninive izy no nihaona tamin'i Damisa, Asyrianina izay tsy mivadika mandra-pahafatiny. Ny Emperora Domitian, izay nankahala an'i Apollonius, dia nampiditra am-ponja azy ary nitondra azy tamin'ny fitsarana mivaivay. Nandositra izy, very ny làlany. Ao akaikin'i Efesosy no misy azy, ary maty izy rehefa lehibe. Tahaka an'i Aramaika i Kristy dia miseho "imbetsaka" izy amin'ny fotoana maro sy any amin'ny toerana maro, izay mameno ny famoahany azy malaza eo anivon'ny vahoaka. Too malaza, koa nanaja hatrany amin'ny fahafantarana fa Md Jean Chrysostome, hounds hamely azy taonjato mbola 4e, manenjika ny calumnies sy rehefa mifandray, ankoatra ny hafa, ny mpisandoka sy ny Imp Satana? Tena nilaina ny nanapaka an'io "Kristy" grika io mba hanomezana izay ilain'ny antony. Apollonius avy any Tyana dia nanana fiantraikany lehibe. Apolloniosa dia, na dia fony mbola velona, ​​tsy voninahitra ho toy ny hendry, fa natahotra noho ny sasany ho toy ny ody, tian'ny hafa ho toy ny andriamanitra, na fara faharatsiny, nohajain'ny ho toy ny maha mihoatra ny natoraly. Tany am-piandohan'ny fiangonana, ny fahamendrehany dia niseho tamin'ny fotoana iray. Tamin'ny taonjato faha-18, ny adihevitra momba ny fanoherana ny kristiana dia nahita ny fiainan'ity toetra ity ho an'ny fahafahana vonjimaika. Ankehitriny dia efa reraka ny andriamanitra, ny filozofa dia tsy nahatratra ny tanjona, ny sisa tavela tamin'i Apollonius avy ao Tyane ihany no ilay mpiasa mahagaga. Taorian'ny nanolorana azy ho fitohizan'ny Pythagoras sy mpifanandrina amin'i Jesoa Kristy.
Ny miafina Jesosy - Apolloniosa Izany no tena tantara mifono mistery kely fantatra, araka izay nanaloka ny efa rehetra izao dikan-ny fiainan'i Jesosy, izay mbola tena azo antoka tahaka ny tahirin-kevitra ara-tantara dia zara raha misy sy marefo; Fa ny dikan-teny hafa dia heverina ho "sacrilege". Ny maha-zava-dehibe an'io lohahevitra io dia toa ahy ary tsy afaka maka na inona na inona amin'ny hafatr'i Jesosy. ny Rain'ny Eglizy dia fantatra foana fa ny lalana 'i Jesoa sy Apollonius avy Tyana mifamatotra hafahafa, ary ny sasany dia natahotra ny fotoana ny fifantohana handrava ny laza Apolloniosa sy ny hiseho ho mpitondra hafatra avy amin'ny demony. Apollonius dia teraka efa-taona talohan'ny vanim-potoan'ny Krismasy, nefa tsy nahalala izany nandritra ny taona vitsivitsy. Toy izany koa i Jesosy. Raha ny marina, tsy misy na inona na inona milaza fa tsy tena teraka izy ireo. Tahaka an'i Jesoa, dia "nambara" ny nahaterahany. Ny reniny Penthea dia nanonofy ny fahitan'ilay andriamanitra Proteus izay nanambara taminy fa hiditra ao amin'ny zaza niandry azy izy. Tsy ao anaty lava-bato iray i Apollonius tonga eto amin'izao tontolo izao fa eo amin'ny ala iray, izay efa nodimandry i Penthea; Nivory nanodidina azy ny mpihaza, nanidina tsimoramora ny elany lehibe, raha naneno ny mozika masin'Andriamanitra. Rehefa nifoha izy, dia vao teraka ilay zaza, ary nianjera teo amin'ny tongony ny tselatra. Amin'ny fito, dia ankinina amin'ny mpanora-dalàna izy; Nandritra ny efatra ambin'ny folo, niala tao Tarsus izy (izay nahalalany an'i Paul), avy eo tany Aegae, izay nianarany tao amin'ny Tempolin'i Asclepios izay nahitany ny fanomezana fanasitranana sy ny aretina.
Ny filozofa, izy dia nanolotra ny teny fanintelony an'i Pythagorean. Izy koa dia mpitaingin-tsoavaly, mpanao majika, demonolojista. Tahaka an'i Jesosy, i Apollonius dia niresaka teny aramianina, fiteny ampiasaina ao Kapadokia. Saingy niteny ihany koa izy tamin'ny teny grika madio sy malaza indrindra. Fa i Jesoa dia nandray ny batisany tao amin'ny lohataona masina iray izay nanana ny herimpo mitovy amin'ny an'ny Jordana. Ny taratasy fangatahana dia tsy mijanona ao; Tamin'ny faha-14 taonany, nentin'ny ray aman-dreniny tany Tarsus izy ary avy eo tany Pergamum, any Aegae, izay nisy tempoly malaza tao Aesculapius. Tahaka an'i Jesosy tamin'io taona io, dia niresaka tamin'ireo mpisorona izy, izay talanjona tamin'ny fahanterany sy ny fahendreny. Avy amin'ny 12 ka hatramin'ny 30 dia milaza ny Evanjely momba ny fiainan'i Kristy. Ny fomban-drazana sy ny antontan-taratasy ao amin'ny fiteny Pali dia milaza fa nandany ireo "taona very" tany atsinanana. Tamin'izany fotoana izany ihany, i Philostratus, ilay mpanao gazety momba ny fiainan'i Apollonius avy any Tyana, dia nitondra azy ho any Inde sy Himalaya. Manjavona ireo firenena izay mifandray akaiky amin'ny fiainan'ny olona ny andriamanitr'olombelona; Ireo mpihira masina dia mivelona, ​​mandray anjara amin'ny fombafomba amin'ny feon'ireo zavamaneno hafahafa izy, mitombo fahalalana sy fahendrena. Azo inoana fa nihaona tamin'i Tibet i Jesosy sy Apolonia.
Ao amin'ny 30, i Jesoa sy i Apollonius dia niseho indray teo amin'ny fiainam-bahoaka. Ny voalohany dia nanely ny fampianarany ary nampitombo ny fahagagana nandritra ny telo taona. Apolonia dia manao toy izany koa; Manasitrana koa Izy, manangana ny maty ary manenjika. Ireo Filazantsara kanônika dia milaza ny tantaran'ny fahafatesan'i Jesoa teo amin'ny hazo fijaliana, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany taorian'ny efapolo andro. Saingy misy fijoroana vavolombelona hafa izay nahafatesan'i Jesosy ny fahafatesana ary niaina nandritra ny fotoana lava be. Ireo dia tsaho tsy marim-pototra, fa ny fomban-drazana maharitra izay mendrika fanadihadiana. Ny soratra manahiran-tsaina indrindra dia mahatonga azy hipetraka any India. Mbola hankalazaina any ihany izy, ary misy ny fandevenana ao Srinagar, any Kashmir, fa ny tononkira sasany koa dia manondro an'i Apollonius. Io farany io, raha ny marina, taorian'ny taona 33 taona dia nitohy niaina tany Gresy ary lasa zato taona, saingy tsy mahafantatra na inona na inona mikasika ny fiaramanidina farany izay mety nitarika azy koa tany amin'ny Himalaya.
Apollonius avy ao Tyana, filozofa fanavaozana tamin'ny taonjato faha-XNUMX AD: fandalinana fanakianana: amin'ireo antontan-taratasy tsy misy afa-tsy ny fiainana Apollonius ao Tyana
14,60€ ao amin'ny staoky
3 vaovao manomboka amin'ny 14,60 €
tamin'ny 25 Mey 2020 4:03
Part Number mainty sy fotsy fanoharana
Daty namoahana 2013-06-01T00:00:01Z
Isan'ny Pages 222
Iza moa Andriamanitra, miaraka amin'i Morgan Freeman (Video)
Ny anaran'Andriamanitra any Afrika
Ny arabo arabo any Sodana, ny orana eo amin'ny fiainana na ny coca-cola?